Wararka - Ku adkee hadafkaaga, oo sii wad dhiirigelinta.
Kulanka kooban ee Yu Rucheng ee sannadka 2021 ayaa si sharaf leh loo qabtay. Intii uu hoggaaminayey maareeyaha guud Mr. Liu Jianjun, aqoonyahannada waaxda suuqgeynta ayaa la yimid riyooyinkooda, iyagoo soo koobaya shaqo la'aanta qeybtii hore ee sanadka, iyo qorsheynta sidii loo gaari lahaa yoolalka qeybtii labaad ee sanadka, oo wax ku biiriya “guriga” Yu Rucheng, oo ka dhig riyada mid aad u buuxisa. Ka dhig aasaaska mid sii cagaaran.
Bilowgii kulanka, Li Sixian, agaasimaha waaxda suuqgeynta gudaha, iyo Yang Wen, oo ah agaasimaha waaxda suuqgeynta dibedda, ayaa soo koobay waxqabadka shaqada iyo waayo -aragnimada la uruuriyay qeybtii hore ee 2021, waxayna geeyeen diiradda iyo jihada shaqada qeybtii labaad ee sanadka. Intaa ka dib, aqoonyahannada waaxda suuqgeynta ayaa iyaguna qaaday masraxa si ay u soo koobaan oo uga warbixiyaan shaqadooda.
Rumayso, bax oo dhan, iyo tamar togan ayaa ah furayaasha ugu muhiimsan ee shirkan sannadlaha ah. Kulanka, waxaan ku xoojinay kalsoonida aan ku qabno himilooyinkayaga iyada oo loo marayo laba fiidiyow. Waxaan sidoo kale fahannay hawsha muhiimka ah ee xubin ka noqoshada waaxda suuqgeynta Yu Rucheng iyada oo loo marayo sheekada hal -abuurka iyo ujeeddooyinka asalka ah ee maareeyaha guud Mr. Liu Jianjun.
Galabtii, iyada oo laga jawaabayo arrimaha ay ka wada hadleen aqoonyahannada suuqa, kaaliyaha maareeyaha guud ayaa qof walba u horseeday in uu sameeyo hawsha shaxda gidaarka ee wada-samaynta. Qof walba marka hore wuxuu u qaybsamay kooxo si uu kaligiis uga doodo. Afar wareeg oo dood iyo gorgortan ah ka dib, natiijadii wada -hadalkii iyo ansixintii qof walba ayaa lagu soo koobay xal u helidda dhibaatada. Geedi socodkan, qof walba si firfircoon buu u hawlanaa, si joogto ah ayuu isku dhici jiray, marna aad buu u murmi jiray, marna wuu u gilgilayay aqoonsiga, ugu dambayntiina wuxuu gaadhay heshiis la isku raacsan yahay, waxayna si wada jir ah ula kulmeen soo jiidashada xikmadda kooxda iyo wada-abuurka.
Gabagabadii kulanka, Mr. Liu wuxuu hadalkiisa ku soo gabagabeeyay: “2021 waa kala bar, hadafyadeenna qeybtii labaad ee sannadkana waa kuwo adag oo ay ka buuxaan caqabado. Waxaan aaminsanahay in qof walba uu ku dhegi karo mas'uuliyadiisa, gaari karo guulaha iibka, ka dhabeeyo ujeeddooyinkiisii ​​hore, horena u socdo! ” Erayada, eray kasta iyo weedh kasta waxay dhiirrigelisaa dhammaan shaqaalaha jooga. Waxaan si adag u aaminsanahay in inta ka hartay 2021, waaxda suuqgeynta Yurucheng ay hubaal ahaan gaari doonto natiijooyin wanaagsan.